USB Wifi Là Gì? 12 USB Wifi Cho PC, Laptop Tốt Nhất 2021 | Grado.vn - Grado.vn
Đang Đọc: USB Wifi Là Gì? 12 USB Wifi Cho PC, Laptop Tốt Nhất 2021 | Grado.vn in grado.vn
1 USB wifi के हो?
2 USB वाइफाइ को प्रकार
3 USB वाइफाइको संरचना र प्रकार्य
3.2 USB वाइफाइ को प्रकार्य
4 USB wifi को फाइदा र बेफाइदा
4.1 USB wifi को फाइदाहरू
5 पीसी, ल्यापटपको लागि USB wifi कसरी प्रयोग गर्ने र स्थापना गर्ने
5.1 कम्प्युटरका लागि ड्राइभरहरू कसरी स्थापना गर्ने
5.2 पीसी, ल्यापटपको लागि USB wifi कसरी प्रयोग गर्ने
6 USB वाइफाइ किन्न छनौट गर्दा नोटहरू:
7 शीर्ष १२ उत्कृष्ट USB Wifi आज २०२१
7.1 USB वाइफाइ ट्रान्सीभर TP-LINK_TL-WN822N
7.2 USB वाइफाइ ट्रान्सीभर TP-LINK TL-WN722N
7.3 USB वाइफाइ ट्रान्सीभर TP-LINK_TL-WN725N
7.4 USB वाइफाइ Asus AC53
7.5 USB वाइफाइ ट्रान्सीभर AC650 Mercusys MU6H
7.6 USB Wifi Totolink डुअल ब्यान्ड AC650 A650UA
7.7 USB वाइफाइ रिसीभर D-Link DWA-131
7.8 USB वाइफाइ टेन्डा W311MA
7.9 USB वाइफाइ Asus USB-AC68
8 USB Wifi को बारेमा बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू
8.1 USB wifi के हो?
8.2 त्यहाँ कति प्रकारका USB wifi छन्?
8.3 कुन वाइफाइ USB ले वाइफाइ प्राप्त गर्न र प्रसारण गर्न सक्छ?
USB wifi के हो?
USB वाइफाइ वास्तवमा एक वाइफाइ एडाप्टर हो। यो हो नेटवर्क उपकरण प्लग पोर्ट जस्तै संरचना छ USB संग जडान गर्न सक्षम हुनुपर्छ पीसी, ल्यापटप USB पोर्ट मार्फत। USB वाइफाइ डेटा भण्डारण उपकरण होइन तर एक विधि हो तपाईको डेस्कटप, वा ल्यापटप (सामान्यतया डेस्कटप कम्प्यूटरका लागि प्रयोग गरिन्छ) मा वाइफाइ थप्ने सबैभन्दा सुविधाजनक र सजिलो तरिका।
तिनीहरूले मोडेमबाट छालहरू प्राप्त गर्नेछन्, राउटर उपकरणमा वाइफाइ सिग्नल थप स्थिर बनाउन, त्यहाँ कुनै घटना हुनेछैन जीवनको हानि, झिलमिलाहट वा झटका ढिलाइ फेरि।
USB वाइफाइ को प्रकार
बजारमा USB वाइफाइका तीन लोकप्रिय प्रकारहरू छन्, जुन USB प्रसारण, वाइफाइ रिसिभर, र तेस्रो प्रकार यी दुई प्रकार्यहरूको संयोजन हो।
USB वाइफाइ ट्रान्समिटर: USB वाइफाइ ट्रान्समिटर प्रयोग गर्दा, यो यन्त्रले तपाइँको कम्प्युटरले प्रयोग गरिरहेको इन्टरनेट लिनेछ र यसलाई वाइफाइ तरंगमा रूपान्तरण गर्नेछ। सामान्यतया यो प्रकारको USB यन्त्रहरू (फोन, ट्याब्लेट, ल्यापटप…) साझेदारी गर्न नेटवर्क साझा गर्न आवश्यक प्रयोगकर्ताहरूको लागि उपयुक्त छ।
USB वाइफाइ रिसीभर: यस प्रकारको यन्त्रमा USB वाइफाइ प्रसारणको विपरीत प्रकार्य हुनेछ। प्रयोगमा हुँदा, यो यन्त्रले वरपरको वातावरणमा वाइफाइ सिग्नल खिच्नेछ। यसको लागि धन्यवाद, तपाईं इन्टरनेटमा जडान गर्न सक्नुहुन्छ।
USB प्राप्त र प्रसारण दुवै: यो सबैभन्दा बहुमुखी र बहुमुखी USB प्रकार हो। प्रयोगको आवश्यकताहरूमा निर्भर गर्दै, तपाइँ तपाइँको यन्त्रको लागि वाइफाइको आवश्यकताको आधारमा वाइफाइ प्रसारण वा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
USB वाइफाइको संरचना र प्रकार्य
हाल बजारमा त्यहाँ धेरै प्रकारका वाइफाइ यूएसबीहरू छन् र यहाँ हामी आधारभूत संरचनाहरूको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छौं जुन आजका वाइफाइ उपकरणहरूमा उपस्थित छन्। सामान्यतया तिनीहरूसँग3मुख्य भागहरू छन्। विस्तार:
पहिलो भाग: USB पोर्टलाई सम्पर्क गर्ने भाग, यो अन्य सामान्य USB भण्डारण उपकरणहरू जस्तै भएको भाग हो, तिनीहरू कम्प्युटरको USB जडान पोर्टमा फिट गर्न डिजाइन गरिएको हो।
दोस्रो भाग: प्रसारण गर्न आवश्यक उपकरणको वाइफाइ ट्रान्समिटर हो। यो एक महत्त्वपूर्ण भाग हो जुन हरेक USB wifi उपकरणमा छ।
तेस्रो भाग: वाइफाइ युएसबी माइक्रोचिप हो, जसलाई उपकरणको मुटु भनिन्छ, यो मिनी इलेक्ट्रोनिक चिप जस्तै छ। हाल, त्यहाँ वाइफाइ रिसेप्शन समर्थन गर्न डिजाइन गरिएको एन्टेना संग धेरै यन्त्रहरू छन्, तर ती सबै समान छैनन्।
USB वाइफाइ को प्रकार्य
स्थिर वाइफाइ गति सुनिश्चित गर्न वा वाइफाइ इन्टरनेट गति बढाउनुहोस् इलेक्ट्रोनिक उपकरण को लागी। मोडेम, राउटर वा मूल वाइफाइ ट्रान्समिटरहरूबाट वाइफाइ सिग्नलहरू प्राप्त गर्न USB जिम्मेवार छ। त्यसपछि, USB wifi को लागि धन्यवाद, कम्प्युटर वा ल्यापटप इन्टरनेटमा जडान गर्नका साथै वेब सर्फ गर्न, ब्राउजर र सामाजिक सञ्जालहरू प्रयोग गर्न सक्छ। एकै समयमा, USB wifi सँग वरपरका यन्त्रहरूका लागि वाइफाइ तरंगहरू साझेदारी गर्ने कार्य पनि छ। यो कम्प्युटरहरूका लागि समाधान हो जुन वाइफाइमा जडान हुन सक्दैन वा वाइफाइ कार्डहरू बिग्रिएको छ।
USB wifi को फाइदा र बेफाइदा
USB wifi को फाइदाहरू
प्रतिष्ठित ब्रान्डहरूबाट उचित मूल्यहरू।
कम्प्याक्ट आकार, उच्च सौन्दर्यशास्त्र।
बोक्न सजिलो, हिँड्दा मानिसहरूका लागि उपयुक्त।
USB जडान पोर्टको प्रयोगको कारणले, यो सबै प्रकारका कम्प्युटर र ल्यापटपहरूसँग उपयुक्त छ।
एन्टेना बिना USB Wifi प्रकारहरूको लागि, दायरा धेरै सीमित हुनेछ। परिवार जस्तै धेरै ठूलो नभएको ठाउँमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ।
गति धेरै उच्च छैन: यो एक मोबाइल उपकरण हो, त्यसैले यसलाई प्रयोग गर्दा, गति र वातावरण को प्रभाव मा केहि सीमितता हुनेछ। इन्टरनेट गति USB wifi को wifi धेरै छिटो हुने छैन त्यसैले यो भारी अनलाइन गेमिङको लागि उपयुक्त हुनेछैन।
पीसी, ल्यापटपको लागि USB wifi कसरी प्रयोग गर्ने र स्थापना गर्ने
USB wifi को प्रकारमा निर्भर गर्दै, तपाइँ यसलाई USB पोर्ट मार्फत तपाइँको कम्प्युटर वा ल्यापटपमा सिधै प्लग गरेर तुरुन्तै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, जबकि अन्य प्रकारले प्रयोग गर्न ड्राइभरहरू स्थापना गर्नुपर्छ।
कम्प्युटरका लागि ड्राइभरहरू कसरी स्थापना गर्ने
केहि प्रकारका USB वाइफाइको साथ, खरिद गर्दा, सीडी ड्राइभर र स्थापनाका लागि निर्देशनहरू समावेश गरिनेछ। सीडीमा स्थापना डिस्क राख्नुहोस्, यदि स्थापना स्वचालित रूपमा भयो भने तपाईंले सूचना प्राप्त गर्नुहुनेछ। यदि तपाईंले सूचना प्राप्त गर्नुभएन भने, यी चरणहरू पालना गर्नुहोस्।
चरण 1: ड्राइभर ड्राइभमा autorun.exe फाइलमा डबल-क्लिक गर्नुहोस्।
चरण २: एउटा नयाँ विन्डो देखा पर्दछ, जसमा तपाईले स्थापना गर्न चाहनुभएको USB वाइफाइ उपकरणको नाम समावेश छ। उपकरणको नाममा क्लिक गर्नुहोस् र अर्को क्लिक गर्नुहोस्।
चरण ३: अर्को डिस्प्लेमा, स्थापना सुरु गर्न अर्को बटन थिच्नुहोस्
चरण ४: ड्राइभर स्थापना गर्न कम्प्युटरको लागि छोटो समय पर्खनुहोस् र अन्तमा समाप्त चयन गर्नुहोस्।
पीसी, ल्यापटपको लागि USB wifi कसरी प्रयोग गर्ने
चरण 1: एकपटक तपाईंले ड्राइभर स्थापना गरेपछि, कम्प्युटरमा वाइफाइ USB प्लग गर्नुहोस्। ल्यापटप, पीसी स्वचालित रूपमा उपकरण पहिचान र सुरु हुनेछ। विकल्प प्यानलले सबै उपलब्ध वाइफाइ नेटवर्कहरूको सूची देखाउँछ। यन्त्र चयन गर्न प्रोफाइलमा थप्नुहोस् क्लिक गर्नुहोस्।
चरण 2: चरण 1 को अन्त्यमा, वायरलेस नेटवर्क गुण विन्डो देखा पर्दछ। अब तपाईले नेटवर्क कुञ्जी प्रविष्ट गर्न आवश्यक छ जुन वाइफाइ पासवर्ड सजिलै वाइफाइ नेटवर्क प्रयोग गर्न सक्षम हुनको लागि हो।
जडान पूरा भएपछि, इन्टरनेट प्रयोग र स्थिर छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि जडान गति जाँच गर्नुहोस्।
USB वाइफाइ किन्न छनौट गर्दा नोटहरू:
USB wifi को एक प्रकार छनोट गर्नुहोस् जसमा दुईवटा प्रकार्यहरू छन् जुन प्रयोग गर्न सजिलो छ र समय र पैसा बचत गर्नुहोस् यदि तपाइँ दुवै प्राप्त गर्न आवश्यक छ भने। वाइफाइ प्रसारण।
प्रतिष्ठित र गुणस्तरीय ब्रान्डहरू जस्तै: D-link, TP-लिङ्क, Totolink…
धेरै जसो USB ड्राइभहरूले अब Windows 10 लाई राम्रोसँग समर्थन गर्दछ, त्यसैले किन्नु अघि आफ्नो मिल्दो अपरेटिङ सिस्टमलाई विचार गर्नुहोस्।
शीर्ष १२ उत्कृष्ट USB Wifi आज २०२१
USB वाइफाइ ट्रान्सीभर TP-LINK_TL-WN822N
TP-LINK_TL-WN822N रेडियो ट्रान्सीभर उच्च-गति इन्टरनेट पहुँचको लागि प्रतिष्ठित ब्रान्ड TP-LINK बाट। एकै समयमा, यो2360-डिग्री घुमाउने एन्टेनाहरूसँग सुसज्जित छ जसले लचिलो रूपमा दिशा परिवर्तन गर्न र जडान दायरा विस्तार गर्न सक्छ।
साधारण WPS कुञ्जीको साथ राम्रो सुरक्षा
यन्त्रको खरिदमा समावेश गरिएको सीडीको लागि सजिलो स्थापना धन्यवाद
WiFi मानकहरू: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
USB वाइफाइ ट्रान्सीभर TP-LINK TL-WN722N
USB wifi TP-LINK TL-WN722N त्यहाँ एक 4dBi एन्टेना छ जुन तपाईले छुट्याउन सक्नुहुन्छ र जब तपाईलाई क्षतिबाट बच्नको लागि सार्न आवश्यक छ। थप रूपमा, एन्टेनाले 150Mbps को अधिकतम गतिमा वाइफाइ रिसेप्शन र प्रसारण बढाउने प्रभाव पनि राख्छ।
QSS बटनको साथ सजिलो वायरलेस सुरक्षा ईन्क्रिप्शन
USB 2.0 इन्टरफेस, विभिन्न उपकरणहरूसँग उपयुक्त
USB वाइफाइ ट्रान्सीभर TP-LINK_TL-WN725N
USB TP-LINK_TL-WN725N कम्प्याक्ट डिजाइनको साथ २०२१ मा सबैभन्दा धेरै किन्न लायक १२ USB वाइफाइको सूचीबाट बाहिर हुन सक्दैन। तुरुन्तै PCs मा जडान गर्नुहोस्, 14 भाषाहरूमा समर्थन गर्ने उपकरणहरू भएका कम्प्युटरहरू।
USB 2.0 इन्टरफेस, ल्यापटप वा पीसी संग जडान गर्न सजिलो।
ब्यान्ड 2.400-2.4835GHz, प्रसारण शक्ति 20dBm।
WiFi मानकहरू: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n।
उन्नत सुरक्षा उपकरणहरू समर्थन गर्नुहोस्, अनाधिकृत पहुँच रोक्नुहोस्।
USB वाइफाइ Asus AC53
Asus उच्च-टेक इलेक्ट्रोनिक्स जस्तै Asus ल्यापटप, Asus डेस्कटप कम्प्युटर, र इलेक्ट्रोनिक सामान को लागी प्रसिद्ध छ। थप रूपमा, Asus नेटवर्क उपकरण कम छैन, Asus AC53 wifi USB को एक सुपर सानो डिजाइन छ। कम्प्यूटरमा सुरक्षित रूपमा प्लग गर्न सकिन्छ र पातलो ह्यान्डब्याग भित्र पनि लामो समयसम्म सुरक्षित गर्न सकिन्छ।
MU-MIMO प्रविधिले धेरै मिल्दो ग्राहकहरू अनलाइन हुँदा जडान गति बढाउँछ।
– डुअल-ब्यान्ड समर्थनले तपाईंलाई सहज 4K UHD सामग्री स्ट्रिमिङ र कम विलम्बता गेमिङको लागि 5GHz ब्यान्ड दिन्छ।
USB वाइफाइ ट्रान्सीभर AC650 Mercusys MU6H
यस प्रकारको वाइफाइ USB मा 5dBi एन्टेना छ, वाइफाइ रिसेप्शन र कभरेज बढाउन र Windows 10/8.1/8/7/XP चल्ने कम्प्युटरहरूलाई समर्थन गर्दछ।
लचिलो नेभिगेसनको लागि एन्टेनालाई 180 डिग्री घुमाउन सकिन्छ
साधारण USB 2.0 पोर्टमा जडान गर्नुहोस्।
USB Wifi AC मानक गति 2.4GHz ब्यान्डमा 200 Mbps, 5GHz ब्यान्डमा 433 Mbps।
USB Wifi Totolink डुअल ब्यान्ड AC650 A650UA
USB Wi-Fi रिसीभरको रूपमा काम गर्नुको अतिरिक्त, यो उत्पादन अन्य फोनहरू, ट्याब्लेटहरू, … को लागि नेटवर्क साझेदारी गर्न Wi-Fi हटस्पट (वाइफाइ पहुँच पोइन्ट) पनि हो। प्रकार्य Windows 10 अपरेटिङ सिस्टम कम्प्युटरहरूमा प्रयोग गरिन्छ र एकै समयमा 8 यन्त्रहरू जडान गर्न समर्थन गर्दछ। तपाईंले कुनै पनि अतिरिक्त ड्राइभर वा समर्थन सफ्टवेयर स्थापना गर्नु पर्दैन, यसलाई तुरुन्तै प्रयोग गर्न सक्षम हुन Totolink AC650 USB Wifi प्लग इन गर्नुहोस्।
चरम प्रदर्शनको लागि नयाँ Wi-Fi AC मानक।
Windows 10/8/7/XP/Vista (32/64-bit), MacOS 10.11 – MacOS 10.15 लाई समर्थन गर्दछ।
Windows 10 मा स्व-पहिचान चालक
USB 2.0 पोर्ट मार्फत जडान गर्नुहोस्
MU-MIMO प्रविधि समर्थन
USB वाइफाइ रिसीभर D-Link DWA-131
D-Link DWA-131 USB Wifi उपकरणले Linux, MacOS वा Windows PC वा ल्यापटपहरूको नेटवर्क स्थिति सुधार गर्न मद्दत गर्छ। सामान्य डाटा USB जस्तै कम्प्याक्ट डिजाइनको साथ। WPS (Wi-Fi संरक्षित सेटअप) मानकको साथ, यसले स्वचालित रूपमा प्रयोगकर्ताको राउटरसँग सुरक्षित वायरलेस जडान सिर्जना गर्दछ, जसले तपाईंलाई जटिल कन्फिगरेसनहरू गर्नबाट बचाउँछ।
लोकप्रिय अपरेटिङ सिस्टम Windows XP, 7, 8, MacOS 10.4 र माथिको लिनक्स,…
शक्तिशाली 300Mbps गति।
USB वाइफाइ टेन्डा W311MA
USB Tenda W311MA बाह्य एन्टेना 3.5dBi संग अधिक संवेदनशील छ। सफ्ट एपी सुविधाको साथ, Tenda W311MA ले अन्य वायरलेस उपकरणहरूलाई जडान गर्न र इन्टरनेट प्रयोग गर्न अनुमति दिने WiFi हटस्पटको रूपमा काम गर्न सक्छ।
150Mbps को गति संग कम्प्युटर र ल्यापटप को लागी WiFi प्राप्त गर्नुहोस्।
AP मोडलाई समर्थन गर्नुहोस्, Tenda W311MA लाई अन्य उपकरणहरू जडान गर्न र प्रयोग गर्नको लागि WiFi ट्रान्समिटरमा बदल्न मद्दत गर्नुहोस्।
Tenda W311MA धेरै अपरेटिङ सिस्टम MacOS, Linux, Windows सँग उपयुक्त छ…
USB वाइफाइ Asus USB-AC68
ASUS USB-AC68 उपकरण एक डुअल-ब्यान्ड USB हो जसले 1300 Mbps (5GHz) र 600 Mbps (2.4GHz) सम्मको नेटवर्क गतिसँग ताररहित रूपमा जडान गर्न सक्छ। थप रूपमा, 3×4 MIMO एन्टेना डिजाइनले Wi-Fi रिसेप्शनलाई अनुकूलन गर्न ASUS AiRadar बीम जेनेरेसन प्रविधि समावेश गर्दछ।
USB 3.0 इन्टरफेस 10 गुणा छिटो डाटा स्थानान्तरण गतिको लागि।
उत्कृष्ट प्रदर्शनको लागि लचिलो व्यवस्थाको लागि र्याक डिजाइन।
USB TP-Link मार्फत, तपाईंको घरको कम्प्युटरले पहिलेको जस्तै सुस्त गतिमा wifi इन्टरनेटमा जडान गर्नु पर्दैन। यन्त्रले 300Mbps सम्मको रिसेप्शन गतिको साथ प्रयोगकर्ता अनुभवलाई बढाउँछ। गेम खेल्न, भिडियो कल गर्न वा अनलाइन फोन कल गर्न सजिलो भयो।
WPS बटनको केवल 1 पुसको साथ जडान गर्नुहोस्।
अत्यन्त कम्प्याक्ट डिजाइन, तपाईंलाई धेरै ठाउँहरूमा वा व्यापार यात्राहरूमा टाढा ल्याउन मद्दत गर्नको लागि सुविधाजनक।
सबै PC वा ल्यापटप Windows 10/8.1/8/7/XP, Linux, Mac OS मा राम्रोसँग काम गर्दछ।
– चोरी हुने चिन्ता नगरी Wi-Fi को गति बढाउन र सुरक्षा गर्ने उत्कृष्ट तरिका
– Wifi प्रत्यक्ष के हो? Wifi प्रत्यक्ष जडान गर्न4तरिकाहरू
– २०२१ मा शीर्ष १२ उत्कृष्ट कम्प्याक्ट मिनी ल्यापटपहरू
USB Wifi को बारेमा बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू
यो USB पोर्ट जस्तै संरचना भएको नेटवर्क उपकरण हो, त्यसैले यसलाई USB पोर्ट मार्फत PC वा ल्यापटपमा जडान गर्न सकिन्छ।
त्यहाँ कति प्रकारका USB wifi छन्?
त्यहाँ3प्रकारका वाइफाइ USB छन्: USB वाइफाइ ट्रान्समिटर, USB वाइफाइ रिसीभर र अन्तिम प्रकार माथिका दुवै प्रकार्यहरूको संयोजन हो।
कुन वाइफाइ USB ले वाइफाइ प्राप्त गर्न र प्रसारण गर्न सक्छ?
तपाईंले एन्टेना डिजाइन भएको TP-Link TL-WN722N USB wifi USB वा एन्टेना बिना नै अत्यन्त कम्प्याक्ट TP-LINK TL-WN725N लाई सन्दर्भ गर्न सक्नुहुन्छ।
Xem Thêm Laptop Dell Inspiron 3593-70197457 (i5-1035G1/4GB RAM/1TB HDD/15.6"FHD/MX230 2GB/Win10/Đen) | Grado.vn
Vì sao iPhone X vẫn là lựa chọn “số 1” của người dùng ở thời điểm này? | Grado.vn